Imininingwane yokuhlola ebuyekeziwe - princetoncovid.org
Imininingwane yokuhlola ebuyekeziwe
Amakhithi wokuhlola asekhaya asekhaya e-COVID-19 ayatholakala kubahlali baseMercer County abaneminyaka engu-14 nangaphezulu. Ukubhaliswa kwe-inthanethi iyadingeka. Imeyili IkhayaTesting@mercercounty.org ngemibuzo.
Izakhamizi zasePrinceton ezifuna ukuhlolwa kwe-COVID kwengane engaphansi kweminyaka engu-14 ziyelulekwa ukuba zihlole nodokotela wazo wezingane.
Ngaphezu kwalokho, Ikhemisi elihlanganayo leSanté ku-200 Nassau Street unikeza ukuhlolwa kwamahhala kwe-COVID-19 ngo-10 ekuseni kuya ku-2 ntambama ngoMsombuluko kuya ngoLwesine. Chofoza lapha ukubhalisa. Usizo luyatholakala ngesiNgisi nangeSpanish ngokubiza (609) 921-8820.